Mareykanka oo Malaayiin dollar dul-dhigay Madaxda Al-Shabaab | KEYDMEDIA ENGLISH
Waxaa ku jira xubnaha la raadinayo hogaamiye Axmed Cumar Abu Cubeyda, oo bedelay Axmed Godane oo Sep 2014 lagu dilay duqeyn ka dhacday nawaaxiga Baraawe, G/Sh/Hoose.
WASHINGTON, USA - Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa shaaciysa in lacag dhan 6 milyan oo doolar abaalmarin ahaan loo siin doono qofkii soo sheega halka ay ku sugan yihiin afar hogaamiye, oo katirsan Al-Shabaab, kuwaasoo lagu eedeeyay ku lug-lahaanshaha weeraro argagixiso oo ka dhacay Kenya iyo Soomaaliya.
1 - Abuu Cubeyda: Waa hogaamiyaha Al-Shabaab, wuxuu kooxdan hogaaminayay muddo 7 sano, isagoo xukunka la wareegay kadib markii Mareykanka uu duqeyn cirka ah ku dilay Axmed Cabdi Aw-Maxamed (Godane) Sep 2014 duleedka degmada Baraawe, G/Sh/Hoose.
Intii uu Abu Cubeyda hogaaminayay Al-Shabaab, waxay Kooxdiisa tan iyo sanadkii 2013-kii ka geystay Kenya, waxaana ugu darnaa weerarkii ka dhacay Jaamacadda Gaarisa April 2015, kaasoo ay ku dhinteen 148 qof.
Sidoo kale, gudaha Soomaaliya Al-Shabaab ayaa fulisay Qaraxii ugu weynaa Taariikhda kaasoo ka dhacay 14-kii Oct 2017 Isgoyska Zoobe, kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad kun qof.
2 - Mahad Karate waaa ku xigeenka Abuu Cubeyda, waana madaxa Amniyaatdka [Garabka Sirdoonka]. Karate waxuu leeyahay awood badan, isagoo lasoo shaqeeyay Axmed Godane.
Amniyaatka Al-Shabaab ayaa door muhiim ah ka qaata fulinta weerarada ismiidaaminta iyo dilalka qorsheysan ee ka dhaca Soomaaliya, Kenya iyo dalalka kale ee gobolka Geeska Afrika.
3 - Fu'aad Maxamed Khalaf [Shongole], waa ninka 3aad ee ugu awoodda badan Al-Shabaab, wuxuuna qaabilsan yahay dhanka dhaqaalaha iyo xagjireynta dhalinyarada kusoo biirta Kooxda.
Wuxuu Shongole bixiyay amar lagu fuliyay qarax ismiidaamin ahaa oo lagu qaadey saldhig Ciidanka Itoobiya ku lahaayeen Muqdisho April 2008, xiligii ay soo ifbaxday Kooxda Al-Shabaab.
April 2010, Khalaf waxay dowladda Mareykanka ku dartay liiska argagaxisadda, waxaana uu noqday mid kamid ah kuwa loogu doon-doonista badan yahay madaxda Al-Shabaab.
4 - Jacfar oo loo yaqaano Abuu Camaar, ayaa Al-Shabaab u qaabilsanaa dhanka fududeynta qaraxyada, waxaana uu soo noqday ku xigeenka C/qaadir Maxamed C/qaadir, waxaana la sheegay in hal il ay ka maqan tahay.